WAX KASTA OO AAD U BAAHAN TAHAY INAAD OGAATO OO KU SAABSAN KORITAANKA CASCADE IYO PETUNIAS SUPER CASCADE - WARSHAD ORNAMENTAL KORAYA
Cascade petunia iyo cascade super: noocyo, beerto iyo daryeelka
Laba sano oo la soo dhaafay, ubaxa petunia wuxuu soo jiitaa dareenka beeraha ubaxa iyo curinta. Waxaa jira sababo dhowr ah. Marka hore, waxay jecel yihiin quruxda yaabka leh ee ubaxa: dhalaalaya, weyn, midabo kala duwan iyo qaabab. Marka labaad, waxay leedahay waqti dheer ubax dheer. Saddexaad, petunia waa mid ka mid ah dhirta yar oo si fiican u isku dhafan dalagyada beerta kale. Iyo afaraad, waa wax aan qabin ee beerista iyo daryeelka.
Ma taqaanaa? Petunia waxay magaceeda ka heshay ereyga "petun" - tani waa magaca tubaakada ee Brazil, halkaas oo ubaxani uu ka yimaado. Waxay ku hoos jirtay magaca magacan oo ah baayoolajiyadda Faransiiska Jean Baptiste Lamarck ugu horeysay ee lagu sharxay petunia.
Petunia (Petunia) Waxay ka tirsan tahay cirridka qoyaannada qoyaanka ah ee qoyskooda habeenkii. Waxay leedahay qiyaastii 40 nooc, kuwaas oo ay ka jiraan sanadlaha. Ubax waxaa loo isticmaalaa qurxinta beeraha, sariiraha magaalada, dayrka, iyo qolalka, balakoonka, guryaha.
Qodobkani waxaanu diiradda saareynaa faahfaahinta kororka ama xayawaannada xayawaanka ah.
Noocyada qashinka iyo xayawanada casuniga ah
Cascade petunia waxaa loo adeegsaday 60sii qarnigii sagaal iyo tobanaad sababtoo ah isku dhufashada unugyada. Laga soo bilaabo dhammaan noocyada kale ee dillaaca ama "hargabka" "petunia" way kala duwan yihiin dhererka iyo dabacsanaanta afkaha hoos u dhacaya, sida haddii ay noqoto mid casri ah. Si dhakhso leh ayuu u koraa, si wanaagsan ayuu u koraa. Badanaa la xiro qolofta loo yaqaan "petunias" ayaa laga heli karaa iyagoo ku xiran dhar qabad leh balakoono, daaqadaha daaqadaha, gawaarida, gasebos, lampposts.
Waqtiga dheer ee caleemaha xayawaanku waxay gaareen 1-2.5 mitir. Cabbirka, midabka ubaxa, muddada ubax iyo hababka wax soo saarku way kala duwan yihiin waxayna ku xiran yihiin nooca dhirta. Muuqaalka ugu muhiimsan ee loo yaqaan 'petunias cascade' waa diidmada xaaladaha qabowga iyo xaaladaha cimilada.
Xilliga, mararka qaarkood xayawaanka petunia iyo xayawaanka casunia ayaa lagu kala saaraa noocyada kala duwan, inkastoo aysan jirin kala duwanaansho asaasi ah qaabkooda ama daryeelkooda.
Noocyada caanka ah ee cascade iyo petunias cascade super
Waxaan hore u sheegnay in kuwa jilciyayaashu aysan aheyn kuwa aan wax danbi ah lahayn. Caddeyn muuqata ee tani waa noocyo badan iyo Beelaha ubaxa.
Dhammaan noocyada iyo Beelaha oo loo yaqaan 'petunias cascade' ayaa loo qaybin karaa saddex kooxood:
oo leh dabacsanaan, dabacsan oo dabacsan ah oo kora;
oo leh afkoda kora oo hoos u dhacaya inta ay gaarayaan dherer cayiman;
lashes gaaban oo leh joodar gaaban (petunia super cascia).
Noocyada ugu caansan ee petunias cascade - "Surfinia", "Conchita" (Konchita), "Fortunia" (Wonderwave), "Ramblin" (Ramblin), "Typhoon", "Tornado" (Tornado), "Rose" (Rose) Tidal Wave, Gioconda, iwm.
Isaga oo ka hadlaya noocyo caan ah, waxaa lagama maarmaan ah in la soo sheego in noocan oo kale ah petunia waa cascade super. Supercascade - Tani waa beeraan ee petunia weyn oo ubax leh, taasoo ka dhigaysa cascades si joogto ah ubaxyo badan oo waaweyn (12 cm dhexroor) ubax. Waxaa lagu gartaa ubax hore iyo waqti dheer. Foomamka aan aad u dheer, laakiin caleemaha si fiican u dallacan. Taxanahan waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu beero sanduuqyada balakoonka, ubaxyada, dambiilaha la xidho.
Waa maxay jaceylka ku salaysan petunias
Tan iyo markii petunia ahaa asal ahaan degan yihiin wadamo kulul iyo qoyan, waxay jecel tahay diirimaad, qoyaan badan iyo maalin dheer iftiin. Si kastaba ha ahaatee, geeddi-socodka xulashada, Beelaha waxaa la dhigay bred in ay adkeeyaan maqnaanshaha waxyaabahan. Saldhiga Petunia iyo noocyada ay ka mid yihiin qaybta cimilada u adkaysata. Si kastaba ha noqotee, sida dhirta oo dhan, markii ay koraan, waxay u baahan tahay hoggaansamida qawaaniinta qallafsan.
Doorashada goobta degelka: waa maxay iftiinka, qoyaanka iyo heerkulka
Maadaama dhamaan petuniasadu yihiin kuwo diiran oo iftiin leh, haddii aad ku beeri beerta, waxaa fiican inaad ka taxadartid inay ku koraan meel bannaan oo qorrax leh. In hooska caleemaha waa mid aad u fidsan, caleemaha noqdaan kuwo weyn, iyo ubax yar yar. Haddii aad ku beeri daaqadaha ama balakooniyada, ka dibna way ka fiicantahay in laga sameeyo koonfurta-galbeed ama dhinaca koonfureed.
Petunia waxay u adkaysataa abaaro iyo qoyaan xad dhaaf ah, laakiin ma u dulqaadan biyaha taagan. Warshadu waxay u adkeysan kartaa heerkulka illaa -10 ° C. Dareemida heerkulka sare.
Sida caadiga ah, petunia si fudud u dulqaadanaysa xaaladaha cimilada xun, si kastaba ha ahaatee, caleemaha iyo ubaxyada ayaa waxyeelayn kara roobka iyo dabaysha. Sidaa darteed, haddii ubaxyadu u koraan dheriyo, cimilada noocan oo kale ah waxaa ugu wanaagsan inay u guuraan meel amaan ah ama ay ka fekeraan inay hore u sii socdaan.
Dhoobooyinka loo yaqaan 'petunias casquias'
Marka aad dooranayso dheriga warshadan, waa in lagu dhejiyaa maskaxda in aan laguma talin in la beero in ka badan hal ubax oo ah awood illaa 5 litir. Haddii kale, u dagaalanka meel qorraxda ka mid ah, waxay faragalin doonaan midba midka kale waxayna luminayaan saameynta qurxinta. In dheryaha waaweyn oo leh cabbiro 10-14 litir laba ama saddex dhirta ayaa la heli karaa. Xaaladda beerto petunias ee dheriga, waxaa lagama maarmaan ah in la tixgeliyo in masaafada u dhaxaysa afkoda dhirta waa in ay ahaadaan ugu yaraan 15-20 cm.
Ma taqaanaa? In Europe, ma aha caado ah in lagu beero dheriyo monoculture - waxaa inta badan loo isticmaalaa 2-3 noocyo dhirta. Waxaanu bixinaa talo ku saabsan nooca petunias iyo ubaxyada lagu qurxiyo dheryaha si wanaagsan. Qoraalku wuxuu noqon doonaa mid aad u qurux badan: xayawaanka casunia - bidix - ipomoea; Petunia - Calibrahoa - Bacopa; Colius - xayawaan qolof ah - Allisum, Verbena - petunia-cascade - Calibrahoa, iwm.
In dheryaha leh dhexroor ah oo ah 28 cm, 3-5 petunias double iyo 5-7 qashinka casri ah waa la beeray karaa.
Sida loo soosaaro cascade iyo petunias super cascadias
Si loo gaarsiiyo shimbiro qurux badan oo ka yimaada petunia iyo ubax, waa lagama maarmaan in la raaco talooyin dhowr ah oo ku saabsan daryeelkooda iyo beerahooda. Waxay la xiriiraan shuruudaha ciidda, beeritaanka iyo waraabinta waraabinta, bacariminta iyo qallajinta.
Cascade petunias ayaa si fiican ugu nool xayawaanka bacrin ah, si kastaba ha ahaatee waxay doorbidaan loamy iyo boodhka ugu badan ee dhan. Dhulku waa inuu dabacsan yahay, qoyan, iftiin iyo dhexdhexaad ah.
Wixii beeritaanka dheryaha, waxaad isticmaali kartaa hannaanka ciidda soo socda:
dhulka beeraha (2);
dhulka caleenta ah (2);
ciid webiga oo aan ahayn (1).
Waxyaabaha noocaan oo kale ah ayaa sidoo kale suuragal ah:
dhulka beeraha (1);
Waa muhiim! Qeybta hoose ee dheriga waa in lagu daboolaa lakabka dhoobo la ballaariyey si loo hayo qoyaanka ciidda, sidoo kale ha illoobin in hoosta ay tahay inay godad u noqoto in laga saaro biyaha xad-dhaafka ah.
Tiknoolajiyada dalbashada cascade iyo petunias super casias (nidaamka abuurka + shuruudaha).
Aad bay ugu xiran tahay tayada wax-soo-saarka - waxaa fiican inaad joojiso doorashadaada miraha laga keeno. Iyo inaad hubiso in aad ku iibsato oo kaliya kaliya ee la xaqiijiyey dukaamada khaaska ah.
Waqtiga lagu talinayo beeritaanka waa Febraayo. Marka guriga - dhammaadka March. Xaaladdan oo kale, ubaxu waxay u baahan yihiin inay sugaan May iyo June.
Beeridda, waa lagama maarmaan in la qaato weel dhoobo leh daloolka biyaha, oo ka buuxi substrate, ma helin 1-1.5 cm ilaa gees. Petunias waxaa lagu beeray dusha sare ee ciidda, oo aan la budaynin dhulka, haddii kale si fudud ma gabi doonaa. Si ay u sahlanaato heerarka, waxay isku dayeen inay isticmaalaan cadayga.
Ma taqaanaa? Tan iyo abuurka petunia aad bay u yar yihiin markaad beerto waxay adagtahay in la arko sida dhabta ah ee dhulka loo dhigo, waxaad ku beeran kartaa barafka. Way sahlan tahay in si siman loogu qaybiyo baraf cad.
Beeraha lagu beeray waa in lagu rusheeyaa biyo waxaana lagu daboolaa caag balaastik ah ama dhalo, warqad, iyo unugyo agrotechnical ah. (Qaar ka mid ah jajabyada petunia waxay kugula talinayaan abuurka abuurka weelasha cuntada ee dabool leh.)
Qolka abuurka Gagaabku waa inuu noqdaa mid si fiican u iftiimaya, waxaa muhiim ah in lagu hayo heerkulka isaga oo aan ka hooseeynin + 20 ° S (heerka ugu sarreeya - + 23 ° S). Tan iyo dhirta qoyan waxay u baahan tahay iftiin badan, waxay noqon laheyd mid aad u fiican in la sameeyo iftiin dheeraad ah 14-20 saacadood. Marka aad guriga joogtid, waxaad isticmaali kartaa nalalka dhaadheer.
Xilliyaadka dalaggu waxay u baahan yihiin in la duubo (10-15 daqiiqo), iyo sidoo kale inay eegaan qoyaanka ciidda.
Caleemaha waa inay soo baxaan hal ilaa laba toddobaad. Haddii muddadan ka dib aysan weli muuqan, uma fiicna sugitaanka iyaga - midkoodna sprouts ma noqon doono mid dhan, ama dhirta iyaga ka soo baxaya ayaa daciif ah oo aan habooneyn.
Daryeelka saxda ah ee geedo, quudinta xayawaanka casunias (+ transplanting dhul furan ama dhejis)
Marka dhamaadka waraaqaha geedo ka taabto daboolka ama dhalada, weelka ay la socdaan waa in la furo. Laga bilaabo hadda, waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo qoyaanka ciidda - waxaa muhiim ah in aan la dhaafin ama ku shub. Waraabinta waxaa lagu sameeyaa digsiga ama xididka hoostiisa.
Sida ugu dhakhsaha badan geedo waxaa la qaadi karaa farahaaga (ama muuqaalka saddexda caleemo), waxay u baahan yihiin in la soo saaro - lagu beeray weelal gooni ah.
Waa muhiim! Haddii, natiijo ahaan, waxaad dooneysaa inaad hesho ubax fiican leh nidaam xidid oo horumar leh, waxaad bilaabi kartaa geedo geedo yar yar, laakiin bil ka dib waxay u baahan doonaan in loo wareejiyo weel weyn. Dhirta noocan oo kale ah way fududahay si ay ula qabsadaan dhul furan.
Si ubaxyada loo siiyo caleemaha dhinaca wanaagsan iyo maaha inay si xoog leh u fidiyaan, inta lagu jiro mudadaas waxay u baahan yihiin inay abaabulaan nidaamka heerkulka + + 18-20 ° C, habeenkii - + 15 ° C. Ma jiro wax biyo ah caleemaha.
Toddobaad ka dib markii la qaado, dhirta ayaa u baahan in la quudiyo bacriminta adag ee caalamiga ah. Haddii geedo waa la daciifiyey, waxaa laga caawin karaa Bacriminta nitrogen.
Iyadoo lagu salaynayo dhammaan talooyinka iyo caleemaha guuleysta, geedo ayaa diyaar u noqon doona kiniiniga sariirta ubaxa illaa badhtamaha May - horraantii Juun. Haddii cimiladu fiicantahay isla waqti isku mid ah, geedo waxaa lagu beeray sanduuqyada balakoonka ama dhoobada.
Marka xayawaankaaga koray, waxaad u baahan tahay inaad sii wadato xakamaynta laba arrimood: qoyaanka ciidda iyo joogitaanka nafaqooyinka. Intaa waxaa dheer, si loo siiyo petunia in ay leeyihiin qaab qurux badan oo Bloom weyn, waa in aad ka takhalusi caleemaha sare iyo inflorescences dheeraad ah. Tan waxaa lagu sameeyaa adoo baraya. Haddii aad isweydiinayso haddii aad u baahan tahay inaad xoqdo xayawaanka casunka, waxaanu aad uugu talinaynaa, maaddaama nidaamkani uu lagama maarmaan u yahay inuu si habboon u koro oo u koro.
Qanjirta ugu horreysa waa la sameeyaa marka duurku galo wejiga koritaanka firfircoon ee caleemaha dhererkiisu yahay 5-7 cm. Tani waxay u oggolaan doontaa caleemaha dhinaca si ay u koraan. Laga soo bilaabo laabta caleemaha kasta wuxuu ku koraa caleemo cusub. Samee nidaamkan bishiiba.
Waxay sidoo kale qabtaan xabbad isbuuciiba ah oo loo yaqaan 'petunias casumias', oo ka saara burooyinkeeda xad-dhaafka ah oo ay weheliso bacaha abuurka. Sidaas waxaad ka caawin doontaa dhirta si bloom badan oo badan, sababtoo ah ka saarista ugxan-kicinta horumarinta burooyinkeeda ubax cusub.
Noocyada waraabinta xayawaanka casunias
Waxaa lagama maarmaan ah in maalin walba la waraabiyo petunia, inta lagu jiro mudada qalalan - laba jeer maalintii. Biyaha waa inay soo dhexgalaan carrada oo dhan, laga bilaabo sare ilaa hoose, sida caddaynta ay ka dillaacday godadka dhoobada. Sidoo kale, dhirta ayaa ku raaxeeysa mashiinka maalin walba ee buufinta. Waxaa lagugula talinayaa inaad koofiyadaha toddobaadkiiba ku ridayso weel biyo qabow. Iyadoo bilawga ah cimilada qaboobaha, xaddiga waraabinta ayaa yareysa.
Nafaqada dhirta iyo bacriminta
Fure u ah koritaanka wanaagsan iyo dhirta ubax waa quudinta caadiga ah. Inta lagu jiro muddada ubax ee hal mar labadii toddobaad ee kasta, petunia waa in la bacrimiyo leh bacriminta buuxda ah ee ubaxyada, doorbidayaa kor u qaadashada potassium iyo magnesium.
Nidaamyada ku-tallaalidda ee loogu talagalay xayawaannada casuka ah iyo kuwa xayawaannada badan leh
Intaa waxaa dheer in habka abuur, petunia cascia ku dhufan karo vegetatively. Si arrintan loo sameeyo xilliga dayrta waa in ay doortaan geedo caafimaad leh oo wanaagsan, oo marka dambe noqdaan hooyo. Dhibaatada ugu weyn ee dhalmada ee habkan waxay noqon doontaa in la hubiyo shuruudo ku habboon ilaalinta unugyada boqoradda - iftiin wakhti dheer leh iyo heerkulka heerkulka + 12-15 ° C. Gooynta waxaa la fuliyaa Febraayo-Maarso. Wixii guntooda isticmaali qaybaha sare ee caleemaha leh dherer ah 4-6 cm. Waxaa isla markiiba lagu beeray substrate waxaana lagu daboolay filim ama lutrasil.
Si loo helo xidid, heerkul ah + 20-22 ° C waa ku habboon tahay xaaladaha caadiga ah, xididada waxaa la sameeyaa 6-10 maalmood. Ka dib 10-12 maalmood ka dib, gooyn ayaa lagu beeray dheriyada, ka dib markii ay ku dhajiyaan dushooda si habboon habka loo yaqaan "petunias".
Sidaas awgeed, waxaan si faahfaahsan u falanqeynay sida ay lagama maarmaan u tahay in la beero habka loo yaqaan "cascade" iyo "petunia super casia" iyo shuruudaha ay tahay in la koro. Ka dib talooyinkaan, waxaad hubaal noqon doontaa inaad kobciso biyaha quruxda badan ee ubaxyada ku farxi doona ubaxooda oo dhan xagaaga.